Black Short Hair Nnukwu Obi Akwụkwọ Student Jingjing Virtual Reality Sex Doll
Nwa bebi nwoke nke Japan,Nnukwu ara mmekọahụ mmekọahụ,E cup ụmụ bebi mmekọahụ,Ebughibu na umu nwanyi,Lshụnanya
Jingjing - 148CM E Cup Nnukwu ara China China dị ọcha Nwa agbọghọ Japan TPE hụrụ nwa bebi + Masturbator + uwe ime akwa + akwa akwa
Save 13%$ 935.99$ 1,065.52
❤ Anyị nwere nnukwu nhọrọ nke nhọrọ ịhụnanya nwa bebi nke nha na uzo di iche iche.
Jingjing bụ nwa agbọghọ dị ọcha si China. O nwere e-cup buru oke ibu mara mma. Ahụ ya nke dị gịrịgịrị na akụkụ ahụ́ ya gbagọrọ agbagọ ga-enye gị mmekọahụ. Akpụkpọ ahụ TPE ya na-eme ka ọ metụ ya aka. Mgbe ọ bụla gị na ya gwuru egwu, ị ga-ahụ ya ọkụ n’obi. Ọ ka si n’ụlọ akwụkwọ mmekọahụ pụta wee chọọ ịkụziri gị ihe. Ọ ga-enye gị karịa naanị nwamba ya mara mma. N'agbanyeghị ụdị enyemaka ị chọrọ, ndụ mmekọahụ gị na mmekọrịta gị chọrọ, ọ nwere ike inyere gị aka na nke a n'ọtụtụ ụzọ.
Elu ： 58.3 sentimita (148cm)
Ibu ibu ： 57.4 lbs (26kg)
Bust ： 28.8 sentimita (73cm)
N'úkwù ： 19.7 sentimita (50cm)
N'úkwù ： 30.4 sentimita (77cm)
Ogwe aka: 16.2 sentimita （41cm）
Lengthkwụ ogologo: 5.9 sentimita （15cm）
Ichikota 52*15.8*11.5 inches(132*40*29cm)